Toxicology Test (ကိုယ်တွင်း ဆေးနှင့် ဓါတုဆိုင်ရာ စစ်ဆေးခြင်း) - Hello Sayarwon
Toxicology Test (ကိုယ်တွင်း ဆေးနှင့် ဓါတုဆိုင်ရာ စစ်ဆေးခြင်း)
Toxicology Tests (ကိုယ်တွင်း ဆေးနှင့် ဓါတုဆိုင်ရာ စစ်ဆေးခြင်း) ဆိုတာဘာလဲ။
Toxicology Tests ဟာ ကိုယ်ခန္ဓါအတွင်း ဆေး၊ ဓါတုပစ္စည်း ပါမပါကို သွေး၊ ဆီး၊ တံတွေး၊ အစာအိမ် အရည်၊ ချွေး အစရှိသည်တို့မှ တစ်ဆင့် စစ်ဆေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဆေး၊ ဓါတုပစ္စည်းတွေဟာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် သောက်ရသောဆေးများ၊ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မပါပဲ သောက်ရသောဆေးများ၊ ဗီတာမင်များ၊ အာဟာရဖြည့်စွက်စာများ၊ အရက်၊ တရားမဝင်သောဆေး၊ ဥပမာ ကိုကိန်းနဲ့ ဘိန်း တို့ပါဝင်ပါတယ်။ လူတွေဟာ ကိုယ်ခန္ဓါအတွင်းကို ဒီပစ္စည်းတွေ မတော်တဆသော်လည်းကောင်း၊ တမင်တကာသော်လည်းကောင်း ထည့်မိတတ်ကြပါတယ်။
Toxicology စစ်ဆေးမှုဟာ ဆေးအမျိုးအစား ၃၀ ကို တစ်ပြိုင်နက် စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီစစ်ဆေးမှုကို သွေး၊ တံတွေးအစား ဘာလို့ ဆီးအတွင်းမှာ စစ်ဆေးရလဲဆိုတာ အကြောင်းရင်း သုံးခုရှိပါတယ်။ ပထမတစ်ခုကတော့ သွေးထက်စာရင် ဆီး၊ တံတွေးတွေကို စစ်ဆေးမှုလုပ်ဖို့ လွယ်ကူပါတယ်။ ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ ဆီးဟာ ဆေးအကြွင်းအကျန်တွေကို သွေးထက်စာရင် ပိုမိုထိန်းသိန်းထားနိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ တံတွေး စစ်ဆေးမှုဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ ဆေးတွေကို တွေ့ရှိနိုင်ပေမယ့် ဆီးစစ်ဆေးမှုကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ငါးရက်အတွင်း ဆေးအသုံးပြုမှုကို တိုင်းတာနိုင်ပါတယ်။
Toxicology Tests တွေကို ဘာကြောင့် လုပ်ကြတာလဲ။
လူအတော်များများဟာ ဆေးကို မတော်တဆ သောက်မိရင်သော်လည်းကောင်း၊ ဆေးလွန်သွားရင်သော်လည်းကောင်း၊ အဆိပ်မိရင်သော်လည်းကောင်း၊ အရေးပေါ်အခြေအနေ အတော်များများမှာ ဒီစစ်ဆေးမှုကို ပြုလုပ်တတ်ကြပါတယ်။ ဆေးအဆိပ်သင့်ခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းကို ရှာဖွေဖို့အတွက်၊ လူတစ်ယောက်ဟာ ဆေးပေါ်မှာ မှီခိုမှုရှိမရှိ သိရှိရန်အတွက်၊ ဆေးပညာအရသော်လည်းကောင်း၊ တရားဥပဒေအရသော်လည်းကောင်း ကိုယ်ခန္ဓါအတွင် ဆေးရှိမရှိ စစ်ဆေးဖို့လည်း အသုံးပြုကြပါတယ်။
ဒီစစ်ဆေးမှုကို ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ အခြားအကြောင်းရင်းတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။
အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးကြောင့် ဖြစ်သော ကျောက်ကပ်ထိခိုက်ခြင်း
အရက်ကြောင့် သေစေနိုင်သော ရောဂါ
Cocaine ကြောင့် လေဖြတ်ခြင်း
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်ခံရတယ်လို့ သံသယရှိခြင်း
Toxicology Tests ကိုမလုပ်ခင် ဘာတွေ သိထားသင့်သလဲ။
ဆီး၊ သွေး sample တွေကို အသုံးပြုခြင်းဟာ တံတွေး အသုံးပြုခြင်းထက် ပိုမိုတိကျတဲ့ အဖြေကို ပေးနိုင်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ဓါတ်ခွဲခန်းနည်းပညာတွေကို အသုံးပြုခြင်းဟာ ဆီးအတွင်းဆေးကို ရှာဖွေရှာမှာ သွေးအတွင်းရှာဖွေခြင်းထက် ပိုမိုလွယ်ကူပါတယ်။
စစ်ဆေးမှုကို ဆောင်ရွက်စဉ်အသုံးပြုရတဲ့နည်းလမ်းတွေဟာ အဖြေရဲ့ တိကျမှုကို သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သောက်ထားတဲ့ဆေးတွေကို မတွေ့ဘူးဆိုရင် ဒါကို false-negative result လို့ ခေါ်ပါတယ်။ False-positive result ကတော့ မသောက်ထားတဲ့ဆေးတွေ တွေ့နေခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ်။
မှားယွင်းတဲ့ အဖြေတွေ ဖေါ်ပြနိုင်ပြီး နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေဖြစ်တဲ့ အဖမ်းခံရခြင်း၊ အလုပ်ပြုတ်ခြင်းတွေ ဖြစ်နိုင်တာကြောင့် အနည်းဆုံးနည်းလမ်းနှစ်ခုကို အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
ယေဘုယျအားဖြင့် ရေအလွန်သောက်ခြင်း၊ အခြားပစ္စည်းတွေ သုံးစွဲခြင်းဟာ စစ်ဆေးမှုအဖြေကို ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။
ဆေးလွန်ခြင်းကိစ္စရပ်တွေမှာ စစ်ဆေးမှုအဖြေပျောက်ဆုံးခြင်း၊ အစားထိုးခြင်းမဖြစ်ရလေအောင် “chain of custody”document ကို စစ်ဆေးမှု အဖြေနဲ့အတူ တွဲထားပြီး sample ကို ကိုင်တွယ်သူတိုင်းက လက်မှတ်ထိုးသင့်ပါတယ်။ ထို့အတူ လေ့ကျင့်ပေးထားသူဟာ ဆီး၊ သွေး၊ တံတွေး sample တွေကို စောင့်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
Inhalant abuse ကို ပုံမှန် စစ်ဆေးမှုတွေနဲ့ တွေ့ရှိနိုင်ခြင်း မရှိပါဘူး။ တကယ်လို့ လူတစ်ယောက်ဟာ ပုံမှန်အိမ်သုံးပစ္စည်းတစ်ခုခုကို ရှူပြီး သာယာနေတယ်ဆိုရင် ဒါကို inhalant abuse လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ကော်၊ လက်သည်းနီဖျက်ဆေး၊ မီးခြစ်ရည်၊ အိမ်သုတ်ဖြန်းဆေး၊ သန့်ရှင်းရေး ဆေးရည် အစရှိတာတွေဟာ အသုံးများပြီး စွဲတတ်တဲ့ဆေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
Toxicology Tests တွေကို ဘယ်လိုပြင်ဆင်သင့်သလဲ။
သင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ သုံးစွဲနေတဲ့ဆေးတွေ (ဆေးဆိုင်မှာ အလွယ်တကူ ဝယ်လို့ရတဲ့ဆေးတွေ) အကြောင်းကို အကောင်းဆုံးအာနိသင်ရရှိဖို့ သေချာစွာဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုအတွက် အထွေအထူး ပြင်ဆင်ဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။
ဆေးစွဲမှုတစ်ခုကို စစ်ဆေးစဉ်မှာ ဒီစစ်ဆေးမှုကို အဆင့်တစ်ခုအနေနဲ့ ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေမှာ အခြားလုပ်ဆောင်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ သဘောတူညီမှုတောင်ခြင်း၊ specimens တွေကို နာမည်တပ်ခြင်း၊ သေချာကိုင်တွယ်ခြင်းတွေ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
Toxicology Tests နဲ့ စစ်ဆေးနေချိန်မှာ ဘယ်လို ဖြစ်မှာလဲ။
ဒီစစ်ဆေးမှုကို သွေး sample နဲ့ ပြုလုပ်စဉ်မှာ အပ်ကိုအသုံးပြုပြီး သွေးပြန်ကြောမှ သွေးထုတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ sample ကို သေချာစစ်ဆေးပြီး အဖြေထုတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆီးစစ်ဆေးမှုကို ပြုလုပ်စဉ်မှာတော့ sample ကို နှောင့်ယှက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ဖို့အတွက် ဥပဒေဆိုင်ရာ (သို့) ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဦးက လူနာဆီးသွားခြင်းကို စောင့်ကြည့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Toxicology Tests လုပ်ပြီးသွားချိန် ဘာဖြစ်မှာလဲ။
စစ်ဆေးမှုပြီးချိန်မှာတော့ အဖြေမှန်မမှန်နဲ့ ဆေးပမာဏကို တိုင်းတာဖို့အတွက် သင့်ကို follow up လုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သွေး၊ ဆီး (သို့) တံတွေး အတွင်းတွေ့ရတဲ့ ဆေးပမာဏဟာ အာနိသင်သက်ရောက်ဖို့ နည်းလွန်းခြင်း၊ များလွန်းခြင်းတွေ ဖြစ်နိုင်ပြီး များလွန်းရင် အဆိပ်သင့်နိုင်ပါတယ်။
ဆေးတစ်မျိုးတည်းကို ပမာဏများစွာ သုံးစွဲခြင်း၊ အချိန်ကြာမြင့်စွာ သုံးစွဲခြင်းဟ ဆေးလွန်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဆေးလွန်ခြင်းဟာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ဖြစ်စေ၊ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားမှုမပါပဲ ဖြစ်စေ သောက်နေတဲ့ဆေးတွေရဲ့ ပမာဏ များခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဆေးအသစ်တစ်မျိုးကို စတင်သောက်ချိန်မှာ ဆေးဓါတ်ပြုမှုတွေကြောင့် ပြဿနာတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဆေးမှားသောက်ခြင်း၊ ဆေး ထုတ်လုပ်မှုမှားယွင်းခြင်းတွေဟာ ဆေးပမာဏများခြင်းကို ဖြစ်စေတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်း နှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးပမာဏနည်းခြင်းဟာ ဆေးကို မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ မသောက်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်အချက်တွေက စစ်ဆေးမှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသလဲ။
အချို့ဆေးတွေဟာ အခြားဆေးတွေနဲ့ မှားနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ narcotics မပါဝင်တဲ့ ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးအချို့ကို narcotic လို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
အချို့အစားအသောက်တွေကို သောက်ခြင်း၊ စားခြင်း (ဥပမာ ဘိန်းစေ့ပါဝင်သော အစားအသောက်များ)
ဆေးသောက်ချိန်နဲ့ sample ယူချိန်ကြား ကွာဟချိန်
ဆေးအတော်များများဟာ စစ်ဆေးမှုရဲ့ အဖြေကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ သင်သောက်နေတဲ့ ဆေးတွေအကြောင်းကို ဆရာဝန်ကို ပြောပြသင့်ပါတယ်။
ဓါတ်ခွဲခန်းနဲ့ ဆေးရုံတွေပေါ်မူတည်ပြီး Toxicology Tests ရဲ့ အဖြေတွေဟာ ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ စစ်ဆေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပိုမိုသိလိုတယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်ကို တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Toxicology Tests နဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်းတွေရှိတယ်ဆိုရင် ညွှန်ကြားချက်တွေကို ပိုမိုနားလည်စေဖို့ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
Toxicology Tests. http://www.webmd.com/a-to-z-guides/toxicology-tests?print=true. Accessed June 20, 2016.
Toxicology Screen. http://www.healthline.com/health/toxicology-screen#Drugs4. Accessed June 20, 2016.
Toxicology screen. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003578.htm. Accessed June 20, 2016.